Ucwaningo Lwezindawo E-UAE
Real Estate Listings: » Business Directory » Construction Companies » Ucwaningo Lwezindawo E-UAE1
I-Topographical Survey iyinhlolovo eqoqa imininingwane emayelana nokuphakama kwamaphoyinti esiqeshini somhlaba futhi ibethule njengemigqa yomugqa esizeni. I-Topography ichaza izici ezibonakalayo zendawo yomhlaba. Lapho wenza noma iyiphi indawo noma indawo, unjiniyela wesiza udinga imephu yesayithi ekhombisa imininingwane eminingi efanelekile. Ukuphakanyiswa komhlaba ngqo, imigwaqo, izakhiwo kanye nezimpawu zamanzi kudinga ukucatshangelwa. Imininingwane evela kulezi zinhlolovo ilusizo ekuhleleni umhlaba nasekuboneni imephu yendawo. Ucwaningo lwendawo luveza noma yiziphi izici ezikhona ezingaba ngaphezulu ngenhla, ngqo ngenhla, noma ngaphansi kobuso bomhlaba, njengemigwaqo, izakhiwo, imigodi, izindonga ezigcinayo nezihlahla. I-imeyili ye-imeyili: - [email protected] Inombolo yocingo: - +97142676170
Xhumana nomkhangisi +9714267xxxx